नेपाल आज | प्रचण्डले किन लगाएनन् टीका ?
प्रचण्डले किन लगाएनन् टीका ?
काठमाडौँ । जनयुद्धमा गएदेखि प्रचण्ड र तत्कालिन माओवादी नेताहरुले घोषितरुपमा दशैं बहिष्कार गरेका थिए । धेरै नेताले त्यसबेला दशैँ लगाएत अन्य चाडपर्वको घोर विरोध गरे । यस वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सबैजसो नेताले दशैँ मनाए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परिवारभित्र पनि यस वर्ष दशैँ मनाइएको छ । जनयुद्धकाल र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि प्रचण्डले लामो समयसम्म दशैँको टीका लगाएका थिएनन् ।
२०७४ सालमा भने जनयुद्धपछिको पहिलोपटक प्रचण्डले दशैँको टीका लगाएको तस्वीर सार्वजनिक भयो । त्यतिबेला प्रचण्डले परिवारका सदस्य र आफन्तलाई पनि टिका र जमरा लगाइदिएका थिए । अघिल्लो वर्ष पुत्र प्रकाश दाहालको निधनका कारण दशैँ मनाइएको थिएन । यस वर्ष भने दशैंको टिका लगाउन प्रचण्डका छोरीहरु रेणु दाहाल र गंगा दाहाल आफ्ना सन्तानहरुसहित खुमलटार पुगेका थिए ।
टीका लगाउँदा प्रचण्ड स्वयं उपस्थित थिए । प्रचण्डको उपस्थितिमा प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालले दुवै छोरी, नातिनातिनीलाई टीका र जमरा लगाइदिइन् । प्रचण्डकी कान्छी छोरी गंगा दाहालले टीकाका तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेकी छन् ।
तस्वीरमा प्रचण्डले टीका लगाएका छैनन् र कसैलाई टिका लगाइदिएको पनि देखिन्न । धर्मलाई अफिम मान्ने अन्य कम्युनिष्ट नेताहरुले भने टीका लगाएनन् मात्र अन्य चाहनेलाई पनि टीका लगाईदिए र मान्यजनका हातबाट टीका ग्रहण गर्न पुगे ।
नेकपाका सबै नेताले टीका लगाएपनि प्रचण्डले किन टीका लगाएनन् ? सायद २०७४ सालमा टीका लगाएको फोटो सार्वजनिक भएपछि विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया आएकाले पनि हो कि ?
राष्ट्रपतिकहाँ टीका लगाउन को को पुगे ? (फोटोफिचर)
किन गर्छन ज्ञानेन्द्र ‘गुरिल्ला मार्केटिङ’ ?
पुन निमार्ण प्राधिकरणका कर्मचारी हाेटलबाट घूससहित पक्राउ
मनाङेको मुक्का खाएका गुरुङविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी